HomeWararka CiyaarahaThomas Tuchel oo xiiseynaya inuu dib ula midoobo weeraryahanka PSG Mauro Icardi
Chelsea waxaa la sheegay in xiiseynaya saxiixa Paris Saint-Germain weeraryahankeeda Mauro Icardi inta lagu guda jiro suuqa 2022.
Blues ayaan ka yarayn dookhyada dhexe ee weerarkeeda iyadoo Romelu Lukaku , Timo Werner iyo Kai Havertz ay dhamaantood awoodaan inay ka ciyaaraan booskaas.
Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo ay ku fadhiyaan hogaanka sare ee kala saraynta Premier League, kooxda Thomas Tuchel ayaa ku dhibtoonaysay in ay si joogto ah u helaan kaalinta saddexaad ee ugu dambaysa.
Boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka , saxafiga Ekrem Konur ayaa sheegay in Tuchel uu u furan yahay inuu dib ula midoobo Icardi, oo uu horay uga soo shaqeeyay Parc des Princes.
Inkasta oo uu si joogto ah uga soo muuqday kooxda PSG xilli ciyaareedkan, haddana wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in xiddiga reer Argentina uu u saxiixi doono koox cusub inta lagu guda jiro mid ka mid ah labada suuq ee soo socda.
Xiliga Tuchel, 28-sano jirkaan ayaa gacan ka geystay 20 gool 34-kii kulan ee uu saftay tartamada oo dhan.